Talinayo Video Players for Windows 7 Ultimate 64 Inyar
> Resource > Windows > Best Video Player Wixii Windows 7 Ultimate 64 Inyar
Weli waxaad tahay qof in search of video ah ciyaaryahan ugu wanaagsan ee aad Windows 7 Ultimate 64 yara PC? Haddii aadan ka kooban maskaxdaada iyo wali u furan tahay kala doorashada, isku day inaad ka soo baxay oo kale oo kale oo aan ku qoran halkan. Waxaan xitaa ku dadaali doonaan inay is barbar dhigaan oo kale si aad u sahlanaato. Waxaad u baahan tahay oo kaliya ay u harsan tahay dhowr daqiiqo in ay dhex maraan articles ah. Ugu yaraan, waxaad yeelan doontaa macluumaad dheeraad ah oo ay gacanta ku hor intaadan samayn go'aanka in muhiim Diintiinii.
The Wondershare Player waa software BILAASH in aad kala soo bixi kartaa PC aad Windows iyo Mac labada hawlgala. Waxa kale oo la jaan qaada qalabka aad Android ku salaysan meesha aad iyo ka mobile ka sii qulquli karaan videos rogtid oo aad TV, ku simaha sida screen labaad ama qofka xukuma fog. Interface ee ciyaaryahan Wondershare waa mid aad u sahlan oo aan u baahnayn aqoonta ka hor inta badan si ay u awoodaan inay daabacaan.
Sida lagu muujiyey by shaashada ka, Waxaa ku yaala inta badan badhamada tallaabo caadiga ah (ie play, joojiyo, si degdeg ah Weeraryahanka iyo gadaal) in mid ka mid ah u baahan tahay iyo waxa uu hir bixiyey in nolasha dadka isticmaala ee. On top of in, waxa kale oo aad qaadi karto si dhekhso ah halka daawashada aad video ama music files. Ma aha in anfacaya? Kala duwan ee wax soo saarka qaab in ay taageerayaan ciyaaryahanka sidoo kale waa ay ka sii sasabasho ka badan ciyaaryahan kale oo halkaas. Fiiri ah qaabab file taageeray xaq HALKAN .
Si ay u helaan goobaha dheeraad ah si ay u faylasha aad, si fudud xaq-guji files in lagu loo maqli karo oo aad u yeelan doontaa in ka badan. Taasi waa tusaale ahaan; loading aad Cinwaan, qabsadaan wadada audio iyo channel, shaandheyn jir, size screen, sixitaanka iyo midabka iwm si fudud in aad ka raadin kartaa faahfaahin dheeraad ah ka badan HALKAN .
The media player VLC ayaa markii hore la sii daayay oo bilaabay si loogu isticmaalo PC Windows ka hawlgala. Dhab ahaantii, waxa uu qiyaastii in ka badan 10 sano oo aad u badan tahay taas wuu maqlay. Hadda waa, si kastaba ha ahaatee, socon u download guud ahaan multi-dhufto ee sida Linux iyo sidoo kale Mac OS X.
Waxaa wax laga xumaado, waxaa weli laga yaabaa in qaar ka mid ah kala duwanaansho dareemi ay sabab u tahay nidaamka kala duwan hawlgalka sida ay lana qamandhacyooto Jidhka isbedel loo baabi'iyey in aan ka shaqeeyo OS X Mac ah! Sidaas oo ay tahayna, waxa ay noqon doonaa wax walba oo la mid ah oo la yaqaan, waayo, badhamada tallaabo caadiga ah.
Haddii aanad waligaa hadda ay isticmaleen ciyaaryahan warbaahinta VLC ka hor, waxaad si fudud u akhrisan kartaa warbixin dheeraad galay qaababka loo maqli karo ay dhex HALKAN .
Xawaaladaha Software ama la bilaabay waa ka dhaqso,
Loo maqli Joogto - yar u nugul shilalka inta lagu guda jiro loo maqli karo,
Taageero wanaagsan u HD videos
Raadi doorasho ka yar boosaska badan
Cinwaan labaad ee bandhigga ma aha sida siman